NEPALI SEX STORY : DHURVA MA MATHI CHADERA SEX GARNA LAGYO
nepali chillo puti -
NEPALI SEX STORY : DHURVA MA MATHI CHADERA SEX GARNA LAGYO Hello Nepali Youn Katha Readers, Thankyou vandai gayo. Tesko ali di…
Sex Story Nepali : Sali Sanga Chikna Pauda
Nepali adult story -
Sex Story Nepali : Sali Sanga Chikna Pauda Hello Nepali Youn Katha Readers, भाग्यमानी नै भन्नु पर्छ मेरो एकैपटक जुम्ल्याहा सन्ता…
Nepali Sex Katha : म १६ वर्ष पुगेकी तरुनी Hello Nepali Youn Katha Readers, बैसाख जेठको गर्मीमा केटीहरुलाई कुखुरा पालुं कि पोईला…
Nepali Porn Kanda. Nepali sex Kanda -
Nepali Porn Kanda : पुतिभित्रको लाँडो तातो त थियो नै झन् तातो, रनक्क भएर आयो Hello Nepali Youn Katha Readers, “आज फर्केपछि बाटोम…
भाउजू र छोरी सँग चिकेको कथा - nepali chara kathaHello Nepali Youn Katha Readers,
Bhauju lai mero lado chusna …
अजय र सहोदर बहिनी उषा को सेक्स चर्तिकला - nepali keti chikeko kathaHello Nepali Youn Katha Readers,
“आज त मौसमले च्यालेन्ज गरेको छ यार” सँगै काम गर्ने साथी मदनकृ…
Mero puti chikeko : को को सँग चिकिएन - ब्वाईफ्रेन्ड को अगाडी सर सँग चिक्दाHello Nepali Youn Katha Readers,
सर र म कोठामा वेलुकी रमाइलो गर्ने क्रममा तैयारी खानेकुरा देखि सबै सामान लिएर आयौं र कोठामा बस्यौं । हामी दुबै जना फ्रेस हुने भन्दै वाथरुम मा गयौं, त्यो विवेकले खाट मुनी वाट हेरी …
छिमेकी सरसंग चिकाउंँदा - Nepali Sex With TeacherHello Nepali Youn KathaReaders,
मेरो नाम जमुना माया मोक्तान हो। म अहिले 20 वर्षकी भएं। यो कुरा आजभन्दा 1 वर्ष अघिको हो। त्यसबेला जुन घटना हुन गयो त्यही घटना आज म यहाँ लेख्दैछु।कसम यो एउटा सत्य घटना हो। त्यतिखेर मलाई साह्रै पुती चिलाउने गर्थ्यो तर के गर्नु त्यस बेलासम्म चिकेको भने थिएन ।तर एकदिन त्यो दिन पनि आयो जुनदिन मैले मज्जाले चिकाउन पाएं।तपाईं पनि यही आइडिया प्रयोग गरेर चिक्न र चिकाउन सक्नु हुन्छ होला ।तर एउटा कुरो के हो भने साथी कसले पो तेरो पुती चिलाएछ ला मेरो लाडो तेरो पुतीमा हाल भनेर देला त?कसैले दिदा पनि दिदैन ।कसैले चिकौँ भनेर पनि आउदैन त्यसका लागि त आफैंले आइडिया लगाएर केटालाई भन्न जान्नुपर्छ अनि मात्र चिक्न पाइन्छ ।
तर केटाहरू पनि चिक्न पाएपछी त के कुनै हल्ला गर्दैन अनि त आहा कति मोज।कसैले थाहा पनि नपाउने आफुलाई मज्जा पनि हुने।तपाईं पनि यहीँ आइडिया लगाएर चिकाउनु होला है साथीहरू जून आइडिया यसप्रकार छ। कुरा के थियो भने मेरो घर नजिकै एकजना छिमेकी थियो।उहाँ पेशाले शिक्षक हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई हामी राजन सर भनेर बोलाउथ्यौँ।उहाँ पनि…
शकुन्तलाको मालिस गर्दा पुतीमा आँखा पुगो - chikeko kathaharuHello Nepali Youn Katha Readers,
मेरो नाम रमेश हो, अहिले म २२ वर्षको भएँ । भाग्यका खेल भनुम् आजकल म रोजगारीका लागि साउदीमा छु । यो घटना आजभन्दा तिन वर्ष पहिलेको हो । त्यतिखेर म बौद्धको कार्पेट फ्याक्ट्रीमा काम गर्थेँ । बहिनी सकुन्तला भख्खर एसएलसी देयर पढ्न आकी थिइ । सानो कोठामा दुई जना बस्थिम । पुरानो खालको घर थियो, ट्वाइलेट बाहिर थियो । बाहिर एकदम काइ लागेको थियो । असारको बेलामा पानी खुब परो ।
शकुन्तला ट्वाइलेट जाँदा चिप्लेर लडिछे । उसको हरमा निकै चोट लागेछ । रूँदै आई , के भो भनेको लडेर हर खुस्को भनी । खाटमा सुत् भनेँ र सुरूवाल खोलेँ, दाहिने हरमा चोट लागेको रैछ । खानेतेल लगाएर मालिस गरिदिएँ ।शकुन्तलाको हर मालिस गर्दा गर्दै उसको पुतीमा आँखा पुगो । चिसो रैछ । कट्टु मै मुतिस की क्या हो भनेँ , हैन भनेर उसले सुरूवाल माथी तानी । तेतिखेरसम्म मेरो लाडो सन्किसकेको थियो । पख न काँ उठेकी, भनेर समातेँ । हेर आगो को छेउमा घिउ पग्लिन्छ, तेरो देखे पछी मलाई अति भयो देन ……..भनेँ ।
धेत दाइ के भनेको अरूले था पाए भने के गर्ने……भनेर उ पन्छिन खोजी । …
नयाँ नयाँ स्वद लिने क्रममा मैले पहिलो चोटि भ्ार्जिन केटि लाई चिक्ने शभ अवसर प्राप्त गरे । सुनेर अचम्म मान्नु हुन्छ होला तपाई हरु तर यो यर्थाथ कुराहो कुनै पनि पुरुषको कटि प्रति चाहाना राख्दा भर्जिन केटि होकि होइन भन्ने कुरामा जहिले पनि ससंकित हुने गर्दछन । अलिकती मेरो वारेमा भन्नुपर्दा म अली चन्चले स्वभावको र सिलिम सरीरको जवान केटा म विहान ±२ मा पढाउछु र दिउसो विकास वैको कर्जा साखाको पदमा कार्यरत छु मेरो थुप्रइ केटि साथिहरु छन् तर तिनी हरुलाई हेरेर चित्त वुझाउनु वायक मसंग अरु उपाय छैन किनकि चिक्नी कुरा भनेको त्यस्तो जटिल कुराहो जुन कुरा विना दुवैको र्समर्थन बिना गारो हुन्छ त्यस माथि सदै भेटघाट हुने केटि साथि संग त्यस्तो कुराको प्रस्थाव राख्दा कतै मित्रतानै टुट्ने होकि भन्ने डर र आफनो प्रोफेसन मा दाग लाग्ने होकि भन्ने डर भरखर २६ वर्षलागेको म हर्ेदापनि आर्कसक तर अलि लजालू स्वभावका कारण केटि हरुलाई त्यस किसिम को प्रभाव पार्न अलिकठिन नैथियो म जोकोहि केटि लाई हेनुपरेमा उस्को दुध वाट हर्ेन सुरु गर्छर्ुु कलेजमा कपि चेक प्राय सदै जसो गर्दछु कपि चेक गर्न जादाँ के…
सानिमालाई चिकेको - mom lai chikeko kathaHello Nepali Youn Katha Readers,
एकदिन मलाइ खाना दिएर सानिमा कता जानुभयो । म खाना खाइसकेपछि हतार हतार स्कुलजानलाइ पाइन्ट लगाउन लागेको थिए मलाइ पिसाब लाग्यो म हतार हतार करेसामा गएर पिसाब फेर्न थालेँ । म एकदम झस्के जब देखेँ कि मैले पिसाब फेरेको मेरो सानिमाले हेरी राख्नुभएको रहेछ मेरो मुख रातो भयो उहाँले गधा तलाइ लाज लाग्दैन भन्नुभयो । मैले गल्ती भयो बुबाको अगाडी नभन्नु …